Ngalaba Canary Nkebi 1 na Nkebi 2
Jikọtara: 05 Julaị 2015, 21:31
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Sambrook » 02 Jun 2019, 08:58 kwuru
Gbalị ịwụnye usoro ntụrụndụ yana ruo na m nwere ike ịgwa m esoro ntuziaka FSX anaghị egosipụta ebe ngosi ahụ. Naanị ihe m emeghị bụ gụgụ m files.Ihe dị na Spanish. Enwere m ike ịnagide German mana mana furu efu Spanish, ewezuga ke pasa. A ga-enwe ekele dị ukwuu maka enyemaka ọ bụla.
Ọtụtụ ndị na-ekele ekele n'ọdịnihu.
Jikọtara: 17 Julaị 2019, 04:32
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by nko » 17 Julaị 2019, 04:33
Ana m akwado gị ka ị nwalee ịga ebe a na Spain nke dị na Canary Island. A na-akpọ ya Gran Canaria ma ọ bụ ihe nlere na Spain. Mụ na ndị enyi m bugara ụgbọ elu gawa Spen ma egbughị oge ọ bụla iji leta agwaetiti a. .You gha achoputa ya onwe gi. Guo ihe ozo n’ebe a https://www.canaryislandsinfo.co.uk/ten ... ristianos/. maka ozi ndi ozo banyere ebe a.
Jikọtara: 18 Ọgọst 2018, 00:39
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Lingwell18 » 19 Julaị 2019, 03:03
Kwesighi ime ihe ọ bụla ọzọ karịa ịgbaso ntuziaka onscreen. Gbalịa itinyegharịa Tick ​​kanye akara igbe ndị gbara agba na ntọala ahụ? I mere akara FSX ma ọ bụ ma eleghị anya FSX uzuoku kama? Ọ bụ ihe dị mfe ịwụnye mgbe m mere ya. Achọghị m ịgụ ihe ọ bụla n'asụsụ Spanish n'ezie! lol. Naanị nwaa itinye nrụgharị ma soro ntuziaka jiri nlezianya.
Jikọtara: 10 Nọvemba 2016, 00:08
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by thaman22 » 28 Julaị 2019, 04:11
tienes que mirar siempre las carpetas, y instalar n la biblioteca del FSX las carpetas que tenga ekike mara mma yure ederede teresse na canary part1 y canary akụkụ 2
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by thaman22 » 28 Julaị 2019, 04:13
ị ga-elele folda mgbe niile, wee wụnye na FSX Ọbá akwụkwọ ebe nchekwa nwere ihe odide ma ọ bụ udiri ederede nke kwesịrị ịdị n'ime canary akụkụ1 na akụkụ akụkụ 2
ma FSX anaghị anabata gị na onye na-ahụ maka simulator